Brezila " Journey-Assist - Carnivals, natiora, tora-pasika, miantsena, sakafo,
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Amerika Atsimo » Brezila
Fantaro an'i Brezila!
Fetibe mamirapiratra! Rano tsy manavaka! Ala tsy azo lavina! Misy morontsiraka be tarehy miandry anao!
Ny ala ala Amazoniana, ny morontsiraka volamena an'i Rio de Janeiro, ny fofona kafe faran'izay ambany, riandrano midoboboboka be - izany no mahasarika mpizahatany maro ho any Brezila erak'izao tontolo izao. Ity firenena ity koa dia malaza amin'ny torapasika manerantany (toy ny Copacabana), ny ranomasina mangarahara mafana, ny nahandro Breziliana ary ny vehivavy Breziliana tsara tarehy. Ny hany lesoka amin'ny fizahan-tany amin'io lalana io dia ny vidiny lafo. Farafaharatsiny ho an'ny mponina any Eropa sy Azia. Inona moa fa tena lafo tokoa ny dia an'habakabaka transatlantika.
Inona no tokony hatao any Brezila
Manintona vahiny maro eto koa ny karnavaly breziliana. Ireo mpitsangatsangana dia mandeha any Brezila noho ny fanaon'ity fety ity dia mitaky fitakiana bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny fialantsasatra. Izy ireo matetika dia mipetraka any amin'ny hotely 5 kintana. Mazava ho azy fa saiky tsy tonga any Brezila izy ireo miaraka amin'ny ankizy noho ny karnavaly.
Karnivaly any Brezila
Fitafiana mahatalanjona amin'ny karnavaly breziliana
Fandresena karnavaly any Brezila
Ny ala Amazon dia ala lehibe indrindra eto an-tany!
Ny ala Amazoniana no lehibe indrindra eto an-tany
Ny ala any Brezila no ala tropikaly lehibe indrindra eto an-tany. Ireo izay maniry ny hahita izao tontolo mahavariana misy natiora izao dia tsy afaka mampiasa hotely naorina tao anaty ala. Ny iray amin'ireo malaza indrindra amin'izany dia ny Ariau Amazon Towers, any an'efitra. Ity firafitra tany am-boalohany ity dia miorina amin'ny hazo, izay mifandray amin'ny tetezana mihantona.
Ariau Amazon Towers - trano fandraisam-bahiny any an'ala any Amazon
Famandrihana any Brezila
Ny antsitrika dia mandroso tsara any Brezila. Ity karazana hetsika any ivelany ity dia malaza amin'ny Breziliana sy ny vahiny. Misy ny fepetra rehetra na ho an'ny vao manomboka na ho an'ny matihanina. Ny toerana fisitrihana malaza indrindra dia ny Nosy Fernando de Noronha sy ny fanjakan'i Bahia sy Pernambuco.
Ny fitsorohana any Brezila dia fialamboly mandroso
Ny Nosy Fernando de Noronha
Fahatsiarovan-tena lehibe any Pernambuco
Ny zavamaniry sy ny tranombakoka
Ny mari-pamantarana maritrano malaza indrindra eto amin'ny firenena dia ny sarivongan'i Kristy Mpamonjy, ilay marika famantarana an'i Rio de Janeiro. Ity sary sokitra ity dia mitazona ny tampon'ny Tendrombohitra Corcovado miaraka amin'ny haavony 704 metatra. Ny sarivongana dia 30 metatra ny haavony, tsy misy ny tongony 7 metatra. Ary ny iray amin'ireo tranonkala voajanahary mahaliana indrindra any Brezila dia ny Sugarloaf - tendrombohitra iray manana haavo 395 m. Any akaikin'ny Helodrano Guanabara no misy azy.
Ny mariky ny maritrano malaza indrindra any Brezila - ny sarivongan'i Kristy Mpamonjy
Ny sarivongan'i Kristy Mpamonjy (Rio de Janeiro)
Eto amin'ity firenena ity dia afaka mahita zavatra marobe ny maritrano ny mpanjana-tany. Saika ny tranom-bakoka rehetra saika ny ankamaroan'ny tanàna lehibe. Ny tranom-bakoka mahaliana indrindra dia ao Rio de Janeiro.
Ity, indrindra, dia tranombakin'ny zavakanto maoderina, tranom-bakoka nasionaly (miaraka amin'ny fampirantiana fampirantiana maherin'ny 4 amin'ny botany, antropolojia, géolojia), tranombakoka ara-tantara sy zavakanto, ary tranombakin'ny Indianina.
Mozean'ny zavakanto any Rio de Janeiro
Tranon-tsarin'i Tom de Janeiro rahampitso
Mozean'ny Indianina any Brezila
Fifanakalozana vola sy fifanakalozana any Brezila
Vola nasionaly breziliana - Real Brasilia.
Real Madrid dia mizara ho 100 centavos. Amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny dia ny banknotes misy 2, 5, 10, 20, 50 ary 100 reais, ary koa vola madinika - 1, 5, 10, 25, 50 centavos ary 1 tena izy.
Any Brezila, tsy afaka mandoa afa-tsy amin'ny sandam-pirenena ianao, satria na inona na inona vola itondranao dia tsy maintsy manakalo izany ianao.
Misy dikany ny mitondra vola roa any Brezila - Dolara amerikana sy euro. Hisy tombony kely kokoa ny euro, fa ny fahasamihafana raha oharina amin'ny dolara dia tsy lehibe.
Mpanova Vola Tahan'ny ny breziliana ankehitriny
Toetrandro sy vanim-potoana any Brezila
Ny toetrandro Breziliana dia azo antsoina hoe mahazatra ny firenena tropikaly. Tsy mitovy amin'ny faritra samihafa izy io - manomboka amin'ny subtropika ka hatrany amin'ny ekoatera. Ny morontsiraka Atlantika dia azo tsidihina mandritra ny taona. Ny tena ririnina dia eto atsimo ihany (ny tanànan'i São Paulo sy atsimo), fa na dia amin'ny ririnina aza dia somary latsaka ambany ny mari-pana +10.
Mari-pana rivotra any Brezila
Andro sy rahona any Brezila
Rahoviana no vanim-potoana Breziliana
Ny vanim-potoana orana any Rio dia manomboka amin'ny volana Janoary ary mifarana amin'ny volana Martsa, ary ny any Salvador kosa manomboka amin'ny volana Aprily ary mifarana amin'ny volana Jona. Ny vanim-potoana orana eto dia miavaka amin'ny orana tropikaly fa tsy ny rahona mitombo, ka tsy manelingelina loatra ny fizahan-tany izany. Ny vanim-potoana fizahan-tany "tampon" dia vanim-potoana fialantsasatry ny taom-baovao sy karnavaly (ny faran'ny volana febroary lasa teo). Ny trano fandraisam-bahiny dia voapetraka mandritra ny vanim-potoana mialoha, ary miakatra be ny vidin'ny efitrano.
Brezila amin'ny ririnina 🙂
Ny ankamaroan'ny faritanin'i Brezila dia ao amin'ny faritry ny toetrandro tropikaly. Eny amin'ny lemaka, io karazana toetrandro io dia somary tsy mitovy amin'ny toetrandro tropikaly amorontsiraka. Ny lemaka toa an'i Sao Paulo sy Brasilia dia miavaka amin'ny mari-pana antonony. Ny salan'isa antonony amin'ny alina amin'ny volana oktobra-martsa dia eo amin'ny + 11 ... + 15, ary ny isotherm amin'ny antoandro dia +30. Amin'ny volana sisa, ny mari-pana amin'ny alina dia +17, ary amin'ny andro +28. Ny volana may-septambra dia kely indrindra amin'ny orana.
Weather in Brazil now + forecast
Safidio ny sosona ilainao ary alaivo ny fanazavana ilainao. Fanetrentena, hafainganam-pandeha, onja, orana, rahona any Brezila. Izany rehetra izany dia misy ao amin'ny Widget etsy ambany.
Fiantsenana any Brezila
Souvenir any Brezila
Ny fivarotana eto amin'ity firenena ity dia ahafahanao manao fividianana isan-karazany. Ny kongona any Brezila dia amidy lafo, samy hafa be izy ireo, malaza daholo ny karazan'izy rehetra. Matetika, mpizaha tany no omena sary hoso-doko marevaka amidy any amin'ny faritra tsirairay, ary koa ny vokatra vita amin'ny hoditra. Amin'ireo farany dia ilaina ny manamarika fa tsy souvenir ihany, fa koa ny kiraro. Fa ny vidin'ny kiraro avo lenta dia avo be eto.
Amin'ny fanjakana Pernambuco mivarotra seramika vita amin'ny hosodoko, izay mahafinaritra amin'ny famirapiratana sy ny maha-izy azy. Amin'ny zavatra azo ampiharina bebe kokoa dia afaka mividy kapaoty ho an'ny moron-dranomasina ianao - ilay antsoina hoe. Hawaii, pareo ary bikini.
Amin'ny fanjakana Bahia vokatra dantelina no atolotra - shawl, akanjo, lamban-databatra ary napkin. Ny sokajy fahatsiarovana malaza iray dia ny amulets sy sarivongana hazo.
Amin'ny fanjakana Minas Gerais Vatosoa maro no atolotra amin'ny vidiny mahasarika.
Ny varotra eto amin'ity firenena ity dia nalamina nandritra ny karnaval. Manomboka amin'ny Febroary ary manomboka amin'ny volana martsa. Alohan'ny fivarotana, ny vidin'ny entana dia miakatra haingana, avy eo dia miverina amin'ny ambaratonga teo aloha. Noho izany, ny mpivarotra indraindray dia miresaka ny fihenam-bidy amin'ny 140%.
Ny vanim-potoana fivarotana iray dia atao amin'ny volana aogositra sy septambra. Tsy fotoana tena be mpizahatany izany ho an'ny mpizahatany, noho izany dia mampihena ny vidiny ny toeram-pivarotana sasany.
Ny fiforonan-tsakafo Breziliana dia nosedrain'ny fomban-drazana kulam-pandrindrana Eoropeana, Native American ary Afrikanina.
Feijoada dia iray amin'ireo lovia malaza breziliana
Anisan'ireo lovia malaza ny feijoada (marobe, misy hena, tsaramaso mainty ary legioma hafa misy zava-manitra),
Tutu (vita amin'ny hena sy tsaramaso)
Sarapatel lovia - sarapatel
Sarapatel (voankazo nendasina sy voankazo misy saosy isan-karazany), carne do sol (hena nopotehina tany atsinanana).
Ao amin'ny Amazonia dia manjaka ny sakafo amerikanina amerikana. Tsy dia misy firy any ivelany eropeana, ka ny lovia eo an-toerana dia tena am-boalohany.
Anisan'ireo lasopy, mendrika ny hijerena ny takako. Ity dia lasopy mavo matevina miaraka amin'ny tongolo gasy sy paty maina. I Takako dia fahita eny amin'ny morontsiraka, fa mainka fa ny ao afovoan'ny firenena. Tsy ny olon-drehetra no maniry faran'izay masiaka an'ity lovia ity.
Zava-pisotro mahazatra any Brezila
Ny karazany isan-karazany amin'ny zava-pisotro misy alikaola tsy hita dia misy na aiza na aiza any Brezila.
Momba ny alikaola no tena malaza indrindra ny labiera. Ankoatra izany, manampahaizana manokana dia mihevitra ny labiera avy any Brezila ho tsara indrindra any Amerika Latina.
Momba ny alikaola mahery, ny rum sy kashas dia fahita. Ny môtô Caipirinha koa dia tena malaza.
Rum sy cachasa - fanahy malaza any Brezila
Mazava ho azy, Brezila, raha misy efa nitondra teto, tsy hamela anao tsy hiraharaha anao :). Karnavaly, natiora, moron-dranomasina, zava-mahaliana maro, nahandro Breziliana - izany rehetra izany any Brezila dia afaka mampifaly ilay mpandeha be pitsiny indrindra!
Ireo fiarovan-tsandrin'i Brezila
Fomba fitantanan'ny governemanta: Repoblika filoham-pirenena federaly
Sandam-bola: Real breziliana (€ - BRL)
Sehatra Internet: .br